HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDuulimaadyada Metro Metro ee kusoo kordha Istanbul
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY 0
kordhay adeegyada metro ee istanbul
Duulimaadyada Metro Metro ee kusoo kordha Istanbul. Sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay Metro Istanbul, M6 Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü metro line waxay kordhisay tirada duullimaadyada.
Qoraalka qoraalka ah, bayaanada soo socda ayaa la bixiyay: “M6 Duulimaadyada maalinlaha oo dhan ee wadada Levent-Boğaziçi / Hisarüstü khadka metro ayaa dib loo habeeyay iyadoo la qiimeynayo dalabaadka rakaabkeena.
Gudaha qaab dhismeedka shuruudaha uu oggol yahay qaabdhismeedka jireed ee nidaamka, shaqada ayaa bilaabatay in la qabto hal daqiiqo daqiiqad u dhaxaysa 07: 00-10: 00 iyo 16: 00: 20: 00: 5: XNUMX times subaxdii.
Izmir, jadwalka jiilaalka, basaska iyo moobiilka suuqyada ayaa kordhay 19 / 09 / 2016 Iskudhin, Jadwalka Jiilaalka, Gaadiidka iyo Jadwalka Socdaalka Kordhinta: Degmada Boosaaso oo ay ka mid tahay ESHOT Agaasinka Guud iyo İzmir Metro, oo la furayo dugsiyada 19 September Isniinta illaa xilliga qaboobaha waa fulinta codsiga. Wakhtiyada basaska iyo metro ayaa sii kordhaya inta badan. Agaasimaha Guud ee ESHOT iyo İzmir Metro Inc., 19, ayaa dib u habaynaya barnaamijka bisha Sebtembar, iyada oo la tixgelinayo xoojinta iskuullada iyo saacadaha waxbarashada ee dugsiyada. Baska 1286 waxaa lagu daray baska 186 ee hadda jira iyo tirada basaska waxaa loo kordhiyay 1472. Agaasimaha Guud ee saraakiisha ESHOT waxay joogaan maalinta diinta, iyo 15 baska cusub ee baska ES
Heerkulka ayaa kor u kacay tareenka ayaa sidoo kale biyo u qaybiyay rakaabka 09 / 08 / 2016 Heerkulka kordhiyaa rakaabka tareenka ayaa loo qaybiyey biyo ah, oo Moscow "Timiryazevskaya", "Otradnoye", "Kuzminki", "Ryazanski Buugyaraha" iyo "Prajska" station metro ee cabitaanka heerkulka hawada at bixitaanka rakaabka kor biyaha caadiga ah waxaa loo qeybiyaa. war Moscow by Metro "Timiryazevskaya" 28,2 degrees tareenka dhulka hoostiisa heerkulka hawada, "Otradnoe" station metro degree 28,4 "Kuzminki" station metro degree 28 "Ryazanski Prospekt" station metro 28,2 degree iyo "Prajska" tareenka dhulka hoostiisa 28,2 degree on dhigay cayiman. Sida laga soo xigtay saraakiisha mitrooga "Altufyevo" ee xarun metro 400 waxay ku wareejisay biyo dhalo iyo kun oo mashiinka qoyan. Markii hore, saldhigyada metro ee Moscow waxay bilaabeen nidaam deg-deg ah sababtoo ah xaaladaha cimilada kulul.
Adeegga tareennada ee Denizli-Izmir ayaa kordhay 14 / 07 / 2012 Adeegyada tareennada ee Denizli-Izmir ayaa kordhay: TCDD, Denizli-Izmir inta u dhaxaysa waqtiyada tirada saddex jeer maalintii, tirada tareenada ayaa kor u kacay baahida rakaabka. State Railways 3. Sida laga soo xigtay war-murtiyeed ay soo saareen Agaasimaha Gobolka, 6 oo ka yimid Denizli una socday Denizli, 5 oo ka yimid Denizli ilaa İzmir ayaa la abaabuli doonaa maalin kasta. Dhinaca kale inta u dhaxeysa Soke-Denizli wadada safarka 2 ee u dhaxeysa maalinta, Denizli-Nazilli inta u dhaxaysa maalin-hal maalin ayaa la qaban doonaa. Qoraalkan, tirada safarrada ayaa la kordhiyay marka la dalbado rakaab iyo safarro ayaa lagu sameyn doonaa wiyisha Anatoliyaanka. Duulimaadyada cusub ayaa maanta shaqeeya (14.07.2012).
SAMULAŞ oo kordhay kantaroolka imtixaanka ales 09 / 05 / 2015 SAMULAŞ oo kordhay suuqyada Ales Exam: SAMULAŞ A.Ş. in baabuurta tareenka fudud iyo basaska express ay u hawlgasho Academic in la qabto 10 Sunday, May Shaqaalaha iyo wadashada waxbarashada Imtixaanka Gelitaanka (ales) sababta oo ah ujeedooyinka xitaa ku yaalla in ay sii wadaan oo aan carqalad adeegyada gaadiidka dadweynaha socday in la kordhiyo tirada baabuurta la heli karo. Hadal qoraal ah oo ka soo samulaş Macnaha halkan, 10 Sunday laga yaabaa in tirada baabuurta Nuur gaadiidka tareenka marka la barbar dhigo barnaamijka caadiga ah ee waqtiga xnumx't xnumx'y si, basaska express iyo tirada gaadiidka ku wargeliyay in kiciyey xnumx't xnumx'y ah.
Waqtiyada basaska ee Konya way isbadaleen! Adeegga tareenka ayaa kordhay 12 / 06 / 2017 Waqtiyada basaska ee Konya way isbadaleen! Adeegyada tareenka ayaa kordhay: Degmada Caasimadda Magaalada Konya, wakhti baska si loogu tago safarada habeenkii ah ee taraamyada ayaa ku dhawaaqay in lagu daro taraamka. war Konya degmada Metropolitan ka Qorshaynta Gaadiidka iyo Waaxda Systems Tareenka ayaa yiri: "saacadood 12 waxaa restated waqti ka dhammaan khadadka baska on Monday, June. Jadwalka cusub waxaa lagu soo bandhigay shuruudaha tarbiyada iyo cinwaanka www.konya.bel.tr. Mar kale, 12 June ka Monday Seljuk District of Bosnia iyo Herzegovina, Kosovo iyo xaafadda Sandzak adeegyada gaadiidka dheeraad ah oo wax ku ool ah oo hufan oo leh line 58 ujeedada No. gaari 'Bosnia iyo Herzegovina Tramway Drive Line' ka waddo baska ...
Izmir, jadwalka jiilaalka, basaska iyo moobiilka suuqyada ayaa kordhay
Heerkulka ayaa kor u kacay tareenka ayaa sidoo kale biyo u qaybiyay rakaabka
SAMULAŞ oo kordhay kantaroolka imtixaanka ales
Waqtiyada basaska ee Konya way isbadaleen! Adeegga tareenka ayaa kordhay
Duullimaadyada Mitrooonka ee lagu balaariyay Istanbul
Halichol Metro Transition Bridge waxay kordhisaa sicirka guryaha
Mashruucyada madaarka iyo mitrooga ayaa kordha qiimaha guryaha